Digger EA - Best Forex EA ny | Expert Advisors | FX Robots
Digger EA Mifototra amin'ny vidiny fahaizany ny hifindra amin'ny lalana manokana nandritra ny andro, ary tena mikorontana vanim-potoana. Ny backtest dia natao avy 2009.
The Forex Expert Mpanolotsaina Manitsy ny volavolan-dalàna mifototra amin'ny toe-javatra eo amin'ny tsena. Ny robot ara-barotra dia afaka mampiasa hatramin'ny 4 averina. Ny EA dia tsy mampiasa StopLoss.
Io EA io dia afaka miasa amin'ny fomba roa:
Fomba fiasa nentin-drazana (ConservativeMode = marina). Amin'io fomba io, ny DiggerEA dia tsy mampiasa averina \_ grid \_ martingale MM. Ny robot ara-barotra dia mampiasa ny faharetan'ny fahantrana sy ny fotoana fijanonana mba hifehezana ny loza.
Fomba mahery vaika (ConservativeMode = diso). Amin'io fomba io, ny robot ara-barotra dia afaka mampiasa hatramin'ny 4 averaging. Ny EA dia tsy mampiasa ny fahaverezan'ny fiatoana.
Digger EA - fanaraha-maso an-tserasera
Timeframe - M15. Vola paie: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD. Mety ho ny EA backtested amin'ny trano fisotroana na mifidy rehetra.
Digger EA - Parameter
StartLots - manomboka ny habeny. Ity no fototra voalohany fototra hanokafana varotra. Azonao atao ny manova azy amin'ny EA mifototra amin'ny toe-javatra ara-barotra, saingy tsy mihoatra ny avo roa heny.
UseMM_Balance - Ny sandam-bola amin'ny fametrahana vola. Raha voafetra io safidy io (oharina amin'ny 0), dia ny isam-bolana no isaina isaky ny ampahany amin'ny UseMM_Balance fametrahana. Raha apetraka amin'ny 0, dia ny fandefasana dia voafetra ary mitovy ny StartLots. Ohatra, raha ny StartLots = 0.1 sy UseMM_Balance = 300, raha ny 300 fananana dia manokatra ny lamin'ny 0.1 lot, raha ny fametrahana 600 - 0.2 lot, raha ny fametrahana 900 - 0.3 lot, etsetra. This parameter ilaina amin'ny fanavaozana.
StartLots% Depo - Ny lanjany voalohany amin'ny%. Raha tsy zero, ny tahiry voalohany dia voaisa amin'ny% of the deposit, ny tsy fetezan'ny StartLots sy UseMM_Balance. Raha zero, dia hiasa miaraka amin'ny StartLots sy UseMM_Balance ny EA.
TakeProfitPip - tanjona mahomby amin'ny pips (quotes 4-chif) sy ny vidin'ny varotra.
TrailingStopPip - fijanonana farany amin'ny pips.
StepPip - Dingana ny salan'isa amin'ny pips.
StepAutoAdjust - Ny fanitsiana an-tsokosoko ny dingana amin'ny isa. Raha toa ka ny StepAutoAdjust = marina, ny lanjan'ny dingana dia alamina amin'ny alàlan'ny EA mifototra amin'ny fahavitrihana sy ny fahavitrihana isan'andro
SpreadFilterPip - Manapaha sivana amin'ny pips. Raha mihoatra noho io isa io ny fiparitahana, dia tsy hiraharaha izany ny famantarana.
ConservativeMode - if marina, ny EA dia tsy hampiasa indraindray sy tsipika mivalona \_ raster. Ny DiggerEA dia hividy toe-javatra mahafa-po ihany koa ary hifehy ny risika amin'ny fampiasana ny fihenan'ny fiatoana (StopLossPip) sy ny fijanonana amin'ny fotoana (TimeStop).
PchFilter - if marina, ny DiggerEA dia hampiasa sivana iray mifototra amin'ny toerana misy ny vidin'ny varotra ao amin'ny varotra. Ho an'ny ConservativeMode = marina ihany.
SignalBarSize% ATR - ny haben'ny vatan'ny marika famantarana. Ho an'ny ConservativeMode = marina ihany.
WickSize% - ny haavon'ny haavony (ambony / ambany kokoa amin'ny fividianana \_ fivarotana) ny barika famantarana. Ho an'ny ConservativeMode = marina ihany.
TimeStop - barotra maromaro aorian'izay dia hikatona ny toerana raha tsy mahatratra ny tombom-barotra na ny fatiantoka ny varotra.
Teknika fandefasana teknika. Rehefa voakilasy ny fatiantoka dia hikatona ny EA ny baiko rehetra. Raha apetraka amin'ny 0, dia tsy voakilasy ny fatiantoka.
StopLossPip - ajanony ny fahaverezan'ny pips amin'ny vidin'ny fidirana. The StopLossPip dia tsy maintsy manana ny ConservativeMode = marina.
StopOutLevel% - ny haavon'ny marika ao amin'ny%, izay hanampian'ny EA ny toeran'ny varotra rehetra.
EquityStopLoss% - isan-jaton'ny fiantohana voalohany. Raha mihena eo ny EquityStopLoss% ny sandam-bola ankehitriny, hikatona ny varotra rehetra ny EA.
PriorityLevel= 0 ... 10. Raha ny mpanolotsaina marobe dia nahazo ny famantarana hanokafana toerana vaovao miaraka, dia hosokafan'ny EA miaraka amin'ny PriorityLevel (0 avo lenta kokoa) ilay toerana.
MagicNumber - isa tokana tsy manam-paharoa amin'ny baikon'ny EA. Mba hamarotana ireo fitaovana marobe, dia tsy maintsy manokatra tabilao misaraka ho an'ny mpivady vola takiana ianao ary apetaho ny EA amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mitovy ny MagicNumbers amin'ny DiggerEA rehetra. Mba hampihenana ny loza, iray ihany ny EA afaka manokatra varotra tsindraindray. Ohatra, raha ny DiggerEA iray no mahazo ny fisokafan-kafatra raha ny DiggerEA hafa dia efa nanokatra ny toerany, tsy hotsarovana ny famantarana ary tsy hisokatra ny toerana vaovao.
ID - famantarana miavaka ho an'ny EA. Natao ho an'ny fanaraha-maso tsara kokoa ny baiko rehefa mihazakazaha ny EAs maro ho ahy (toa ny Digger, Miracle) miaraka amin'ny MagicNumber mitovy.
Digger EA - Fampahalalana fanampiny
Fonja farafahakeliny - $ 200.
Minimum maro - 0.01.
Leverage kely - 1: 100, sanda ambony dia soso-kevitra.
Kaonty fanoratana anarana - NDD sy ECN.
Ny EA tsy mitaky Optimization.